SOOMAALIYA IYO MARXALADDA CUSUB: MA 16 SANO KALE OO DAGAAL SOKEEYE AH MISE DAWLAD SOOMAALIYEED OO SHAQAYSA?
Qore: Abdiweli Hassan
Soomaaliya waxaa lagu magacaabaa magacyo kala duwan ilaa markii la riday dawladdii Soomaaliyeed 1991-kii. Dhammaan magacyadaasi waa kuwa taariikh xumo iyo magacxumo ku ah Soomaalida laguna qori doono buugaagta taariikhda qarniyada soo socda. Mudadii dagaalka sokeeye waxaa la sameeyay dawlado iyo shirar dib-u-heshiineed kuwaasoo dhammaantood fashilmay. Juunyo 2006 ayaa waxaa mar kaliya Soomaaliya is badalay qaabkii dagaal-oogayaasha iyo fawdada waxaana awooddii caasimadda iyo gobollo badan la wareegay Midowgii Maxaakiimta Soomaaliyeed. Sida la wada ogsoon yahay waxaa dhacay kacdoon dadwayne kaasoo la dhihi karo waa kacdoonkii siyaasadeed ee saddexaad ee taariikhda Soomaaliya soo mara ilaa waqtigii xoriyadda. Kii koowaad wuxuu ahaa kacdoonkii xoriyadda lagaga qaatay guumaysigii Talyaaniga iyo Ingiriiska sannadkii 1960-kii, kii labaad wuxuu ahaa kacdoonkii kacaankii 21-kii Oktoobar 1969-kii ay sameeyeen Ciidamadii Qalabka siday ee Soomaalidu ku dhaaran jirtay, kii saddeexaadna waxaan anigu qabaa inuu ahaa kacdoonkii dadwaynuhu sameeyeen ee Maxkamaduhu hoggaaminayeen.
Kacaankii Dhicisoobay ee Maxkamadaha:
Markii maxkamaduhu awoodda Muqdishu la wareegeen ayaa haddaladii guddoomiyihii Maxkamadaha Sh. Shariif waxaa ka mid ahaa inay shirweyne isugu yeerayaan ummadda Soomaaliyeed si looga wada tashado aayaha Soomaaliya, sidoo kale wuxuu sheegayay inay la xaajoonayaan Dawladda Ku meel gaarka ah si arrinta Soomaaliya xal loogu helo. Waxaa dhammaan daafaha caalamka looga soo dhaweeyey qodobadaas si heer sare ah, iyadoo la siinayay talooyin wax tar leh. Hase yeeshee waxaa taas badalkeedii laba usbuuc kaddib dhacay in ay maxkamaduhu dhiseen Gole shuuro iyo Gole Fulineed oo in ka badan 90% ay hal beel yihiin, iyagoo guddoomiye guud u doortay Sh. Xasan Dahir Aways. Arrintaasi waxay markiiba dad badan ku abuurtay shaki wayn iyo kalsooni kala laabasho maxkamadihii.
Intaa kaddib dad badan oo weli rajaynayay in arrintu ku meel gaar tahay ayaa talooyin fara badan u gudbiyay kuwaasoo uga digayay cadawyada gudaha iyo dibadda si loo badbaadiyo nabaddii iyo horumarkii ka dhashay meelo badan. Nasiibdaro dhammaan arrimahii laga digayay ee cadawga gudaha waxay noqdeen kuwa guulaysta sida qabyaaladda, Ururka Al-Itixaad oo kaligii awoodda marooqsada, Ganacsatada, dagaal oogayaal ku dhexmilmay, awood ballaarsasho iyo isfidin, iyadoo taasina ay keentay in cadawgii dibadda uu helo fursaddiisa.
Haddaba Golihii Maxaakiimta oo ka koobnaa kooxo ujeedooyin kala duwan leh balse hal doon isla saaran ayaa meel dhexe badwaynta qolo waliba damacday in jihadeeda loo wado, taasi waxay keentay haraq iyo kala yaac. Kooxda ugu awoodda badnayd ee lagu magacaabi jiray AL_SHABAAB ayaa ahaa kuwa dhinaca caddaaladda ugu fiican iyagoo ka fogaa qabyaaladda, balse lahaa cilad ah deg-deg iyo ku fogaansho mayal adag ee dhinaca fulinta shareecada Islaamka. Kooxdan waxaa laga faa�iidaystay dhawr arrimood:
In Soomaaliya ay u baahan tahay awood xoog badan balse Caddaalad ku dhaqda;
In Soomaalidu ay danaheeda muddo gaaban ku xalisan karto iyadoo aan kaalmo shisheeye helin ee dhinac dhaqaale, milateri iyo siyaasadeed;
In Qabyaaladda lagu xalin karo kaliya xoog iyadoo nin walba caddaaladda loo simayo, wax la yiraahdo 4.5 aan waxba lagu qaybsan;
iyo in Midnimada Soomaaliya la soo celin karo
Hase yeeshee kooxihii kale ee qabyaaladda ku shaqaynayay iyo mayal adaygga iyo deg-dega Al-shabaab waxay keeneen inay fashilmaan.
Dawladda Ku meel-gaarka ah ma ka faa�iidaysan kartaa Fursaddan?
Dawladda Ku meel gaarka ah oo lagu soo dhisay Kenya kaddib shir dheer oo socday muddo labo sano iyo bar ah ayaa waxay la halgamaysay muddo dheer sidii ay u xallin lahayd khilaafaadka dhexdeeda ka jira.Iyadoo taas ku mashquulsan walina aan wax hawl ah u qaban shacabkii loo soo dhisay ayay Maxkamadihii Muqdishu ka saareen qab-qablayaashii dawladda ka tirsanaa isla markaana hortaagnaa shaqadeeda. Maalinkaas wixii ka dambeeyay dawladdu waxay heshay fursado maalin kasta isa soo tarayay, gaar ahaan taageerada caalamka. Kaddib duulaankii ciidamada Ethiopia ay ku qaadeen Soomaaliya iyagoo kaashanaya Ciidamada dawladda si loo tirtiro awooddii Maxkamadaha, waxay Dawladda ku meel gaarka ah heshay fursad. Waxay la mid tahay fursaddii ay maxkamaduhu heleen marka laga eego dhinaca awoodda balse haddii ay is mahdiyaan sidii maxkamadaha waxay marayaan waddaddii ay mareen. Si haddaba ay uga faa�iidaystaan una badbaadiyaan qaranka Soomaaliyeed marxaladdan adag waxaa la gudboon inay sameeyaan arrimahan:
In ay si deg-deg ah ugu dhawaaqaan shirweyne dib-u-shiineed ee Qaran, iyadoo laga soo qayb gelinayo dhammaan ururada kale duwan ee matala xirfadlayaasha sida kuwa waxbarashada, caafimaadka, beeralayda, culimada, haweenka, dhallinyarada, oday dhaqameedyada, reer guuraaga, iyo ururkii maxaakiimta;
In shirwenahaas la siiyo muddo ku filan iyadoo la hubo in caalamka daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan EU, AU, UN iyo Arab League inay maalgalinayaan;
In Shirkaas ay ka soo baxdo Dawlad Midnimo Qaran (National Unity Government);
In, si loo siiyo fursad dib-u-heshiinta iyo dhisid qaran tayo leh, la badalo qodobka dastuurka ku meel gaarka ah si golaha xukuumadda dibadda baarlamaanka looga keeni karo;
In Ciidamada la keenayo Soomaaliya, haddiiba ay jiraan, laga qayb galiyo waddamada Carabta;
Qodobadaasi waxay hirgali karaan markii Soomaalidu isku tashato muujisana bisayl iyo isku tanaasul, iyadoo la abuurayo jawi kalsooni iyo wadashaqayn. Waxaana la hubaa in beesha caalamku ay had iyo goor isku haysato arrimaha Soomaaliya saas darteedna ay adkaanayso in ciidamo iyo dhaqaaleba la siiyo dawladda ku meel gaarka ah.
Ethiopia iyo Xariirkeeda Soomaaliya: Colaad ama nabad iyo wada noolaasho?
Taariikhda Soomaaliya iyo Ethiopia waa mid colaad soo jireen ah kaliya ku soo socotay muddo dheer. Had iyo jeer dhinaca Ethiopia ayay colaaddu ka imaanaysay maadaama Soomaalidu aysan marna qabsan ama weerarin dhul dad aan Soomaali ahayn degen yihiin. Haddaba sidee ku dhici kartaa in Colaaddaas loogu badalo nabad? Sidee ku dhici kartaa Taangiyada Ethiopia ee dhex maraya wadnaha caasimadda Soomaaliya in nabad iyo wada noolaansho loogu bedelo?
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa �nin buka boqol u talisay�.
Fursadda in taariikhdaas xun wanaag lagu badalo waxay ku xiran tahay Ethiopia.
Waxaa dhammaan u guurgalayaasha iyo quburada arrimaha siyaasadda Soomaaliya isku raacsan yihiin in Ethiopia aysan doonayn dawlad dhexe oo Soomaaliyeed inay dhalato xitaa mid ay gacan saar fiican la leedahay. Maxaa lagu beenin karaa?
Sida hadda muuqata Ciidamada Ethiopia ee soo galay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku guulaysteen hadafkii dawladooda ee ahaa inay burburiyaan awoodda maxkamadaha iyo inaan dawlad Islaami ah ka dhalan waqtiga dhow Soomaaliya. Balse in dawladda Ethiopia ay gacan ka gaysato shirweyne dib-u-heshiineed iyo dhisid dawlad midnimo qaran waa mid aan suurtogal ahayn marka la eego sida dhaqanka siyaasadda Dawaladda Ethiopia yahay. Waxay Doonaysaa in ay jiraan madax kala madax banaan oo ayada toos uga kala amar qaata, si haddii ay mid isku dhacaan kuwa kale u sii jiraan inta ay ka badalayso midkaas. Siyaasaddan oo Ethiopia qaadatay kuna qanacday kaddib markii ay dhumisay saaxiibkoodii Eriteria- Isayase Afawarke- maadaama uu kaligiis ahaa awoodda ay dhiseen markii la is khilaafay waxay noqotay in danahoodii ay waayaan, qatarna ay ku timaado nabadgelyadooda, saas darteed marna ma ogolaanayaan inay dhisaan hal hoggaamiye Soomaaliyeed si kasta oo uu saaxiib ula yahay maadaama uu is bedeli karo waqti kasta.
Keenista Ciidamo Shisheeye iyo Loolanka Dawladdaha EU iyo Ameerika ee Arrimaha Soomaaliya:
Waxaa muddo dheer la iclaaminayay in la keeno ciidamo Afrikaan ah Soomaaliya si ay uga qayb qaataan nabadgelyada iyo hirgelinta dawladda ku meel gaarka ah. Maxaa hortaagaan? Waddamada Midowga Yurub oo uu dhex boodayo Talyaanigu waxay u arkaan in arrimaha Soomaaliya looga dambeeyo iyadoo la tixgelinayo heshiiskii aan weligiis la qorin ee �Gentlemen�s Agreement� ee ka dhexeeyey dawladdihii Yurub ee Caalaamka guumaystay. Hase Yeeshee Maraykanku taas ma ogola oo wuxuu isu arkaa awoodda kaliya ee in laga dambeeyo inay asaga tahay, Soomaaliyana cid uga aqoon badan aysan jirin maadaama ilaa 1980-kii uu si fiican ugu dhex jiray. Sidoo kale Maraykanku wuxuu u arkaa in Yurub ay dayacayso shidaalka iyo macdanaha Yuraaniyamta ee Soomaaliya dhex yaal isagoo uga baqaya in Shiinuhu gacanta ku dhigo. Sida baryahan sococtana Shiinuhu tartan xooggan ayuu kula jira reer Galbeedka gaar ahaan Afrika. Midda kale waddamada Afrikaanku ma haystaan dhaqaale iyo qalab milateri oo waxay doonayaan in la siiyo labadaba, iyadoo Maraykanku yahay kan kaliya ee siin karaa labadaasba haddii uu doonayo. Balse taas waxaa uga horeeya oo uga wal-wal badan Suudaan dhinaceeda Daarfuur oo uu u la� yahay dhaqaale iyo saanad milateri oo uu siiyo ciidamada Afikaanka, maadaama uu doonayo inuu Suudaan kula tartamo Shiinaha oo mar hore la wareegay Shidaalkeeda, iyadoo Maraykanku sidoo kale doonayo inuu Shiinaha ka ilaaliyo inay u sii gudbaan waddamada shidaalka leh ee Jaad, Cameroon iyo Bartamaha Afrikaba.
Haddaba Yurub oo aan awoodin inay ku midowdo inay dhaqaale iyo Saanad ka madax bannaan Maraykanka siiso ciidamo Afrikaan ah, isla markaana doonayaan inay sida Maraykanka ka hortagaan is ballaariinta Shiinaha ayaa mar walba ku qasban inay si dabacsan ula dhaqmaan Maraykanka, balse aysan marna u ogolaan inuu toos ula wareego Soomaaliya. Haddaba loolankaas ka dhexeeya quwadaha shisheeye wuxuu fursad siinayaa in Soomaaliya kala daadsanaato, iyadoo rajada keenista ciidamo shisheeye oo aan ahayn kuwa Ethiopia ay tahay mid aad u yar.
Gunaanad: Maxaa la gudboon Soomaalida? Fursadda maanta waxaa haysata Dawladda ku meel gaarka ah iyada ayaana laga doonayaa inay u tanaasusho qaybaha kale ee bulshada. Waxaa laga doonayaa inay si Islaannimo iyo Soomaalinnimo leh u wajahaan arrinta murugsan ee Soomaaliya. Waxaa laga doonayaa inaysan ku mashquuliin hanti samaysasho, awood badsasho, aargudasho, iyo tan ugu xun oo ah qaranka oo la iibsado. Waxaa laga doonayaa dhibaatada hortaala ee dhaqaale la�aan, awood la�aan iyo faragelinta shisheeyaba inay uga gudbaan maahmaahda Soomaaliyeed ee ah � dantaada maqaar eey ayaa loogu seexdaa�. Soomaaliya caalamka oo dhan ayaa la dagaalsan ee hal wadan lama dagaalsana, iyadoo dad badani ay moodayaan in waddamada qaar ay uga roon yihiin kuwa kale. Haddaba Shacabka Soomaaliyeed waa inay liqaan waxyaabo badan oo waqtgan aan la wajihi karin si loo gaaro hadafka guud ee ah Soo Celinta Qarankii Soomaaliyeed.
By: Abdiweli Hassan